Ogaden News Agency (ONA) – Hawl-wadeenada jaaliyada magaalada Edmonton oo shir abaabul isugu timid kuna go’aansaday in shirweyne loo qabto jaaliyadda
Hawl-wadeenada jaaliyada magaalada Edmonton oo shir abaabul isugu timid kuna go’aansaday in shirweyne loo qabto jaaliyadda
Xubnaha maamulka jaaliyada magaalada Edmonton ayaa shir hawleed isugu timid oo looga arinsanay arimaha halganka oo ay ku gorfeynayeen hawlaha faraha badan ee horyaala jaaliyada..
Waxaa sidii dhaqanka u ahayd shirarka jaaliyadaha lagu furay aayada quraan ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyey Sh Ismaaciil C/laahi isagoo ka hadlayey waajibaadka uu jihaadku leeyahay waxbadana halkaas looga faa’iideystay.
Wacdigii diiniga ahaa ka dib waxaa lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton halgame Cumar Xirsi oo khudbad aad u qiimo badan oo dhinacayo badan taabanaysa ka jeediyay oo uu kula hadlayey xubnaha jaaliyadu in ay kaalintooda kaga aadan halganka ka soo baxaan.
Waxaa si weyn loo sugayey inuu hadal ka soo jeediyo Isuduwaha cusub ee jaaliyadaha Canada mudane Yuusuf Ismaaciil Xaaji isagoo hadalkiisa ku bilaabay in uu u mahad celiyo xubnaha jaaliyada magaalada Edmonton sida ururnimada leh ee xubnaha u soo abaabuleen shirka ugana soo qayb galeen intoodii badanayd. Isuduwuhu wuxuu aad uga hadlay siyaasada Geeska Africa iyo isbedlka muuqda sidii aynu ula jaanqaadi lahayn kaalin muuqatana uga qaadan lahayn una sii labanlaabi lahayn halgankeena xaqqa ah inagoo muujinayna cududeena hadii ay noqon lahayd halganka ka socda gudaha ama jaaliyadaheena dibada kaalinta ay kaga jiraan halganka inagoo kaashanayna shacbigeena iskuna xirayna Iilaahay.
Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay shirka madax sare oo ka socotay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya uu hogaaminayay mudane Maxamed Maclin Axmed oo ka soo jeediyey shirka khudbad muhiim ah oo ku saabsanayd maanta meesha uu marayo halgankeenu iyo sida loogu baahan yahay in aynu malkadii ugu dambeysey uga saarno halganka si aynu midhaheeda u gurano taasoo ah xoriyada. Waxaana loo baahanyahay buu yidhi mudane Maxamad macallin abaabul weny in aynu qaadno kaasoo aynu ugu magac darayno”Abaabulkii Xoriyada” meelna isugu keeni doona dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida Ogadeniya ee xornimo doonka ah iyo walaalaheena Somaaliyeed ee jecel in aynu gumaysiga ka xorowno.
Waxaan marna la iloobi doonin gabdhaha jaaliyada Edmonton oo mar walba ka qayb qaata abaabulka bulshada waxaana halkaa hadal qiimo badan ka soo jeedisay Marwo Shukri C/llahi Raabi oo si mug leh u tidhi waa in aan loo kala hadhin dadaalka loogu jiro sidii gumaysiga madow laysaga kor qaadi lahaa.
Xubnihii jaaliyada magaalada Edmonton ee shirka ka soo qaybgalay waxay isku afgarteen in sida ugu dhakhsaha badan loo iclaamiyo shirweyn ooy ka soo qayb gali doonaan Gudoomiye ku xigeenka JWXO, hadday u saamaxdo duruurfta shaqo hadii kalena khadka teleefoonka ugaga soo qaybgali doona shirka, iyo dhamaan bulsha weynta ku dhaqan gobolka Alberta iyo nawaaxigeeda kaas oo lagaga arinsandoono isbedalada ka socda Geeska Afrika guud ahaan gaar ahaan Itobiya, shirweynahaa oo aan loo kala hadhin; aqoonyahan, waxgarad, dhalinyaro, odayaasha Ogaadeeniya, hooyooyinka iyo hawlwadeenada jaaliyada magaalada Edmonton .
C/raxmaan ( ilkacase)/Edmonton ,Canada